Tayada Golaha PCB - Pandawill Technology Co., Ltd.
Pandawill waxay leedahay hannaan kontaroolid rasmi ah oo hubiya tayada waxsoosaar walboo maraya marwalba geedi socodka. Nidaamka xakamaynta tayada waxaa ka mid ah xulashada alaab-qeybiyeyaasha, kormeerka shaqada ee socda, kormeerka ugu dambeeya iyo adeegga macaamiisha.
Nidaamkani waa in lagu xakameeyo alaab-qeybiyeyaasha, hubinta qalabka soo galaya, iyo la tacaalidda dhibaatooyinka tayada ka hor inta aan la bilaabin shirarka.
> Hubinta liiska iibiyaasha iyo diiwaanada tayada qiimeeya.
> Baadhitaanka qalabka soo galaya.
> La soco Xakamaynta Tayada ee guryaha la kormeeray.
Nidaamkani wuxuu xakameynayaa isku-dhafka iyo habka baaritaanka si loo yareeyo dhacdooyinka cilladaha.
> Dib-u-eegista qandaraaska hordhaca ah: baaritaanka tilmaamaha, shuruudaha gudbinta, iyo sidoo kale arrimo kale oo farsamo iyo ganacsi.
> Horumarinta Waxsoosaarka Waxsoosaarka: waxay ku saleysan tahay xogta ay bixiyaan macaamiisha, waaxdeena injineernimada waxay horumarin doontaa Tilmaamaha Waxsoosaarka ee ugu dambeeya, kaasoo qeexaya habsami u socodka wax soo saarka iyo teknoolojiyada loo isticmaalay soo saarista badeecada.
> Xakamaynta Nidaamka Waxsoosaarka: raac tilmaamaha wax soo saarka iyo tilmaamaha shaqada si aad u hubiso in dhammaan waxsoosaarka la farsameeyay ay tayo leeyihiin. Tan waxaa ka mid ah xakamaynta nidaamka iyo baaritaanka & kormeerka.
> Hanti dhawrka ugu dambeeya: samee indho indheyn iyo shaqeyn shaqeed, hubi inuu buuxiyo qeexitaannada iyo shuruudaha macmiilka.
> Xirxirida: ku xir boorsooyinka ESD oo hubi in alaabtu ay si fiican ugu buuxsameen gaarsiinta.